avylavitra · Marsa 2011 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Marsa, 2011
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2627 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Marsa, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Marsa 2011
Ny Talata 15 Martsa 2011, izay iray volana taorian'ny fiatombohan'ny fanoherana izay nitranga tao amin’ny Manama renivohitry Bahrain ny 14 Febroary, dia nanambara ny Mpanjaka Hamad bin Isa Al-Khalifa fa hametraka Lalana momba ny Filaminam-pirenena, izay hanome fahefana feno ny tafika mba hiaro ny firenena.
Etazonia: Mpitoraka Bilaogy Momba ny Siansa Manazava ny Horohorontany Sy Ny Tsunami
Mediam-bahoaka16 Marsa 2011
Raha mbola miezaka mamantatra ny antony fisian’ny horohorontany mpandringana, ny tsunami, ary ny tahotra momba ny hery nukleary i Japana sy ny ankabeazan’ny firenena erantany, dia ireo mpitoraka bilaogy siantifika kosa mizara izay zava-misy fantany ho fanazavana ireo zava-nitranga.
Bahrain: Famoretana Tanaty Rà Mandriaka Hatrany an-Tanàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Marsa 2011
Tamin'ny Talata, talohan'ny nanambaràn'ny Mpanjaka Hamad bin Isa Al-Khalifa ny Lalàna momba ny Filaminam-pirenena manome fahefana ny tafika sy ny hery hafa haintoka ny filaminan'ny firenena, ny polisy hanao herisetra sy faneriterena eran'ny tanàna maro ao amin'ny faritra afovoan'i Bahrain.
Yemen: Hafatra Fandrahonana Ho Faty Nahazo Ilay Mpitoraka Bilaogy, Afrah Nasser
Mpitoraka bilaogy sady mpanao gazety Yemenita, Afrah Nasser, naharay hafatra fandrahonana tao amin'ny Facebook tamin'ny 13 Martsa ary nanapa-kevitra ny hamoaka izany tao amin'ny bilaoginy “mba ho izao tontolo izao no hamaky azy“. Ny hafatra fototra dia tamin'ny teny Arabo fa nadikany ho teny Anglisy, niteraka valinteny feno ahiahy avy...
Japana: Ilazao Izao Tontolo Izao Mba Hanampy
Azia Atsinanana15 Marsa 2011
AFikarohana sary nampakarina tao amin'ny Twitter fotsiny dia efa mety hitondra zavatra mahavariana. Tadiavo ny teny hoe "宮城" (Miyagi) ary dia sary maro samihafa no hiakatra mikasika io prefecture io, iray amin'ireo tena vodoana mafy tokoa tao Japana tamin'ilay tsunami farany teo. Akorisaho midina, dia hisy ary sary iray hiavaka,...
Azia Afovoany sy Kaokazy13 Marsa 2011
Yemen: Mpanao Fihetsiketsehana Marefo Amin'ny Fanafihana Feno Herisetra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Marsa 2011
Mitohy miditra amin'ny herinandro faha efatra ankehitriny ireo mpanao fihetsiketsehana mangataka ny fametraham-pialàn'ny Filoha Ali Abdullah Salehm ao Yemen.Saleh dia niantso ny hery ara-politika rehetra hifampidinika. Nolavin'ny mpanohitra ny fanasàna. Mandritra izany fotoana izany, nitohy ny fanafihana ataon'ireo herim-pamoretana sy mpandàla an'i Saleh an'ireo mpanao hetsika ampilaminana.
Filipina: Fanaraha-maso Tsunami sy Tsaho Horohorontany
Azia Atsinanana11 Marsa 2011
Taorian'ilay horohorontany nahery vaika namely an'i Japana, navoaka ny fampitandremana ny mety hisianà tsunami hamely faritra amorontsiraka 19 any Filipina. #Batanes sy #Samar dia lasa lohahevitra nironan'ny rehetra tao amin'ny twitter. Batanes dia ny faritra tena faran'ny avaratra raha i Samar dia miresaka ny tatitra diso hoe nisy horohorontany namely...
Japana: Ny ao Tokyo taorian'ilay horohorontany
Japana11 Marsa 2011
Ny Zoma, 11 Martsa 2011 tamin'ny 2:46:23 tolakandro ora any an-toerana, horohorontany manana tanjaka 8.9 no niantraika tamin'i Japana, ny goavana indrindra voarakitry ny tantara. Ora 5 no efa lasa taorian'ny nitrangan'ilay horohorontany, ary maro ireo olona ao Tokyo no miezaka mamonjy fodiana amin'ny alalan'ny dia an-tongotra. Nakatona ny fifamoivoizana...